DHAGAYSO: Soomaaliya oo loo doortay Agaasime ku Xigeenka shir-guddoonka Hay’ada Caafimaadka Adduunka - Hablaha Media Network
DHAGAYSO: Soomaaliya oo loo doortay Agaasime ku Xigeenka shir-guddoonka Hay’ada Caafimaadka Adduunka
HMN:-Dowlada Soomaaliya ayaa waxaa ay markii ugu horeysay ku fariisatay kursiga Agaasime ku xigeenka shirguddoonka hay’ada Qaramada Midoobay u qaabilsan Caafimaadka WHO kadib muddo 30 sano ah.
Wasiirka Caafimaadka dowlada federalka Soomalaiya Dr Fawziya Abiikar Nuur ayaa noqotay agaasime ku xigeenka shirguddoonka hay’ada WHO waxayna ka qeybqaadatay codeynta Madaxa guud ee Caafimaadka Adduunka ee WHO oo dhowaan loo doortay Dr. Tedros Adhanom Asbuucii hore.
HALKAN KA DHAGAYSO WARAYSI WASIIRKA
Soomaaliya ayaan codeynin muddo dheer, kadib markii dhaqaalo lagu yeeshay ay ka hor istaagtey inay cod yeelato. Laakinse dowlada Soomaaliya oo bixisey dhaqaalahaasi qeyb ahaan ayaa suurtagalisey in dowlada Somalia ay cod yeelato.
Wasiirka Caafimaadka dowlada Federalka oo wareysi siisay laanta afka Soomaaliga ee WHO ayaa sheegtay in dhowaan hoos u dhac uu ku yimid cudurka shuban biyoodka balse haatan uu soo labakacleeyay kadib roobabkii dhowaan ka da’ay dalka Soomaaliya.